Chọ Blog Blog na Technorati | Martech Zone
Ingchọ Blog Blog na Technorati
Tọzdee, Disemba 28, 2006 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Teknụzụ bụ ngwa ọrụ dị egwu - mana ejighi m n'aka etu esi ere ahịa ya niile. Otu njirimara m masịrị m bụ ike ịchọ blọọgụ niile maka mkpado ụfọdụ. Ọbụna m denye aha na nyocha ụfọdụ.
gaa http://www.technorati.com/tag ma ị nwere ike ịchọta mkpado kachasị elu n'oge elekere a MA ọ bụ ịnwere ike itinye ụfọdụ okwu ọchụchọ. Ihe si na ya pụta URL ga-adị ka nke a: http://www.technorati.com/posts/tag/adobe+apollo (ọ bụrụ na ị na-achọ adobe apollo).
Ọ bụrụ n’ịchọpụta, ị nwere ike denye aha na ya RSS na-eri nri ugbu a! Iji onye na-eri nri dị ka Google Reader, ị nwere ike nweta kacha ruo ụbọchị blog ndenye na “Adobe Apollo” ma ọ bụ ihe ọ bụla isiokwu ị ga-amasị ha mgbe ha na-gwa! Ọ bụ ụdị dị ka ịtọlite ​​njikere maka blogosphere niile.
Ihe ozo eji eme ihe bu ichota isiokwu tupu ka ịde blọgụ gbasara ya. Nke a nwere ike inye gị ọdịnaya ụfọdụ siri ike zoro na trackbacks!
Top Adsense Isiokwu: Ajax, Flash, WordPress na Firefox
Microsoft: Biko tinye m na ndepụta gị nke Ferrari
Dorion Carroll kwuru
Dec 28, 2006 na 3:10 PM
Daalụ maka okwu ọma. Obi dị m ụtọ na ọ masịrị gị ma kelee gị maka ime ka ndị ọzọ mara.
Dee 29, 2006 na 11: 01 AM
Heh, enweghị m ike ịnweta Technorati iji melite blog m! Anọ m na-agụ ha maka DABỌCH ~ ~! Banyere nkwado teknụzụ, ọ dịghị ihe na-ada ada ka ihe ịga nke ọma:
"Ọ bụrụ na ịnụghị onye ọ bụla n'ime otu izu, biko nabata mgbaghara anyị maka igbu oge n'ihi na anyị nwere ike ịnwe akwụkwọ nkwado na Nkwado."
Dee 29, 2006 na 11: 12 AM
Mgbe nke ahụ mere m, Etufuru m ọnwa ole na ole kwesịrị akụkọ ihe mere eme na Technorati. O were obere oge, mana ha mechara dozie ya. Enweghị m ike iche n’ogwe blọọgụ niile nke a ga - eme na ogologo oge ọ ga - ewe ha tupu ha mezie ya. Agbalịrị m ihichapụ blọgụ m na ha ma malite karịa… anaghị arụ ọrụ. O yikwara ka ha na-eji ụfọdụ usoro mkpuchi.
Nwee ndidi. Obi siri m ike na ha ga-edozi ya!
Dee 29, 2006 na 11: 17 AM
Ee, mụ onwe m. Ọ nwere ike na-eto mgbu. Onyenwe anyị maara na m na-ata ahụhụ site na Ozi karịrị!
[Brain… na-afụ ụfụ… mkpa… chocolate!]
Dec 29, 2006 na 12:54 PM
Vince, nwute na ị ga-abịarute anyị site na blọgụ Doug, mana achọtara m nsogbu ahụ na nhazi blọgụ gị na sistemụ anyị, dozie ya, mepụta ping ọhụrụ, ugbu a ana m ahụ ọkwa gị na nso nso a na ndeksi anyị.
Ọzọkwa, gbaghara ya. Dorion
Dec 29, 2006 na 1:31 PM
Chaị! Lee banyere nke ahụ!
Daalụ, Dorion !!!
Dec 29, 2006 na 1:37 PM
Na-ekwu maka mmetụta na akpaaka! Ugbu a, olee akwụkwọ ndị Cialdini mere nke a?
Dec 29, 2006 na 8:50 PM
Ka anyị kwuo na ọ bụ ndị mmadụ, na-agwa ndị mmadụ okwu, yana ntakịrị email (akpaghị aka site na nkwupụta blog).
Nke ahụ ọ gụrụ? nkp
Dec 29, 2006 na 9:15 PM
N'ezie, ọ bụrụ na ị gụnyere obiọma, mmata, na ichebara echiche.